WAA MAXAY SABABTA AY NAAGTA U DALBATO LEEFIDA HOOSE - iftineducation.com
iftineducation.com – Saan horay u soo sheegnay culimada way isku khilaafeen leefida ama jaqida alaabta haweenka, laakin culimo badan ayaa fasaxday, marka waxaa iswaydiin mudan meesha la leefayo waa halkee?
hadaba naagta bahalkeeda wuxuu ka kooban yahay kintir iyo faruuryo yaryar iyo kuwa waaweyn, iyo duleelka dad badan waxay u qaateen meesha la leefayo inay tahay duleelka taas sax ma aha, ogow meesha la leefayo waa faruuraha yaryar iyo kintirka, meeshaas dhacaan ma laha, waa sida faruuraha caadiga oo kale, hadaba naagta ma ku raaxaysanaysaa leefida alaabteeda?
Maxaa la smaeeyaa marka lefitanka dhamaado?
markaas waxaa bilaabanayso shaqada culus, ileen naagta si fiican ayay diyaar u noqotay waana kacsatay waxay u baahan tahay in loo galiyo malabyarowga.
Wararkii ugu dambeeyay khasaaraha dagaalka dhexmaray ciidamada Puntland & Galmudug (Sawiro)